305 Ka Mid ah Shaqaalaha Diiwaangelinta Doorashada oo Tababar Loogu soo Xiray Gobolka Sool – Goobjoog News
305 Ka Mid ah Shaqaalaha Diiwaangelinta Doorashada oo Tababar Loogu soo Xiray Gobolka Sool
Guddiga diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland ayaa tobobar ku saabsan qaabka loo diiwaangelinayo dadka ku dhaqan Sool, waxay u soo xireen 305 arday oo ka tirsan ardayda dugsiyada sare iyo kuwa Jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood.
305 arday oo shaqaale ahaan loogu qaatay shaqada diiwaangelinta gobolka SooL oo ay Buuhoodlena weheliso; ayaa waxa laga dhex xushay 800 oo arday oo u fariistay imtixaan shaqaalaysiin ah. iyadoo shaqadani ay ku kooban tahay muddo 21 cisho ah oo ay diiwaangelintu ka socon doonto gobolakaasi.
Wakiilka guddida doorashooyinka u jooga gobolka Sool Cabdulaahi Laba Go’le ayaa warbaahinta u sheegay inay dhammaan 305 qof ay yihiin dadkii ku guulaystay imtixaan ay guddigu ka qaadeen 800 arday; sidaasi darteedna loo siiyey tobobar ku saabsan qaabkii ay u shaqayn lahaayeen, “Waxaanu halkan/laascaanood tobobar ugu soo xirnay 305 kan qof oo dhammaantood ka mid noqon doona shaqaalaha goobaha diiwaangelinta oo midkiiba ay 4 ruux ka hawlgeli doonto waana u sharaf iyo shaqo labadaba dadka gobolka”, ayuu warbaahinta u sheegay mudane Cabdilaahi laba Go’le.
Tababarkan oo socday labo maalmood ayaa 305 qof ay iskugu jireen wiilal iyo gabdho, inkastoo aan si gaar ah loo sheegin tirada gabdhaha la shaqaaleysiiyay ee ka mid noqonaya shaqaalaha diiwaangelinta.
Gobolka Sool, ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee laga qabto diiwaangelinta qaadashada kaarka cod bixinta iyada oo markii hore waqtiga loo muddeeyey uu ahaa 13 Bishan August, ayaa hadana siday ay sheegeen guddiga doorashooyinku, codsi ka yimid odayaasha reer Sool oo ku aaddan in wacyigelin dheeraad ah loo sameeyo, dib loogu dhigay diiwaan gelinta muddo aan wali la cayimin.
Rag Hubeysan Oo Wiil Dhallinyaro Ah Ku Dilay Degmada Wadajir Ee Magaalada Muqdisho
Galmudug: Guddiga Farsamada oo Daabacay Liis Xildhibaanno Ah iyo Cabsi Jirta
Labo Qof Oo Ku Geeriyootey Dagaal Ka Dhacay Degmada Qoryooley, Sh/hoose
Coxkqx gmorqk generic cialis cialis coupon cvs
Bsabsu ixdlng Cialis on line cialis
Tgwsfl tkvxxj sildenafil 100mg when will cialis be over the counter
Slufih cepans Generic viagra canada walmart pharmacy
facts about generic viagra viagra online dove comprare [url=...
credit karma canada how to improve my credit score credit ra...
Here's the perfect web page for people who really want to un...
side effects for cialis cialis generic...
credit reporting agency get my credit report equifax credit...